Olee otú mbupụ iCloud Ndi ana-akpo ka CSV File | Export iPhone Ndi ana-akpo
M chọrọ mbupụ niile m iPhone kọntaktị data ke otu Excel Ebe M Dere. Enwere ụzọ mbupụ data na XLS ma ọ bụ a CSV usoro (ghara ikewa CSV faịlụ maka kọntaktị ọ bụla)? Na m nwere kọntaktsị na m abụọ iPhone na iCloud, ma iCloud-enye ohere ka mbupụ kọntaktị dị ka a vCard naanị. iPhone 4S, iOS 5.1.1.
Chọpụta, ebe a bụ ụzọ. Mbupụ iCloud kọntaktị na CSV, ị dị nnọọ mkpa a software - Wondershare TunesGo. Ọ na-enye gị ike mbupụ niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ zọpụta na gị iPhone si ebe nchekwa, iCloud, Yahoo !, Exchange na ndị ọzọ ndekọ a CSV faịlụ. Mgbe ahụ, i nwere ike imeghe CSV faịlụ na Microsoft Excel spreadsheet maka edezi ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ. Ugbu a, ibudata a software na nwere agbalị.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado exporting iCloud kọntaktị gosiri na iPhone, iPod, iPad na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6 na iOS 5 a CSV faịlụ. Ebe a, ị ga-esi ihe Ama banyere akwado iPods, iPhones na iPads.
Olee otú mbupụ kọntaktị site na iCloud ka CSV faịlụ
Nke mbụ niile, wụnye na mgbe ahụ na-agba ọsọ a software na kọmputa gị. Mgbe ahụ, bụ isi window abịa n'anya gị.
Nzọụkwụ 1. Nweta iPhone / iPod / iPad jikọọ kọmputa
Jiri eriri USB na-eme ka a njikọ n'etiti iPhone / iPod / iPad. TunesGo ga ngwa ngwa ịchọpụta ya, na-egosi ya stof na n'aka ekpe kọlụm nke bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Export iCloud kọntaktị na CSV faịlụ
Ego ma i wee banye n'ime iCloud akaụntụ na gị iPhone ma ọ bụ. Bụrụ na ọ bụghị, biko enweta "Ntọala"> "iCloud" na gị na iPhone, na abanye n'ime iCloud akaụntụ.
Mgbe ahụ, na-ekpe kọlụm nke bụ isi window, na iCloud kọntaktị ìgwè na-egosi elu na Kpọtụrụ udi. Pịa ka ìgwè egosi niile kọntaktsị na iCloud ke ziri ezi. Selectively họrọ gị chọrọ kọntaktị ma ọ bụ họrọ niile. Pịa "Import / Export". Na dobe ala menu, pịa "mbupụ niile Ndi ana-akpo" ma ọ bụ "Export kọntaktị ahọrọ".
Na, na, ị ga-esi ọzọ ndọpụta ndepụta nke ị nwere ike mbupụ iCloud kọntaktị. Ha bụ "na-A Single vCard File", "ka otutu vCard File", "ka CSV File", "ka Outlook Express", "ka Windows Live Mail", "ka Windows Akwụkwọ Adreèsị" na "ka Outlook 2003/2007 / 2010/2013 ". Họrọ "ka CSV File". Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, họrọ a ebe ịzọpụta CSV faịlụ. N'oge nyefe, jide n'aka na i iPhone, iPod ma ọ bụ iPad jikọọ oge niile.
Rịba ama: Tupu exporting kọntaktị site na iCloud ka CSV, na ị na ike jikwaa iCloud kọntaktị, dị ka edezi, merging na Ihichapụ. Mgbe ahụ, họrọ gị chọrọ kọntaktị mbupụ. Otú ọ dị, ihe nile ị na-eme enweghị mmetụta na mbụ iCloud kọntaktị echekwara na netwọk nkesa.
Na-ekiri ndị Video ka Export iCloud Ndi ana-akpo ka CSV File
Gbalịa TunesGo mbupụ iCloud kọntaktị na a CSV faịlụ!
> Resource> iCloud> Olee mbupụ iCloud Ndi ana-akpo ka CSV File